Crime Archives - ShwengweGames
နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် မင်းကုန်းအုပ်စုအောင်သုခကျေးရွာ တွင် သက်ငယ်မဒိန်းတစ်ခုဖြစ်ပွား
အသက် ၁၁ နှစ် အရွယ်သမီးဖြစ်သူအားပထွေးဖြစ်သူ ၃၃ နှစ် (ခန့်မှန်း) မှသားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်သောကြောင့်
ဒဏ်ရာရ မိန်းကလေးအား ခုတင် ၁၀၀၀ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့ သုခဒါနပရဟိတအသင်းမှ ပ်ို့ဆောင်ကူညီခဲ့ပါသည်။
သုခ ဒါန ပရဟိတ အသင်းနေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်
09-420 942 455၊09-773 592 699
ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ မင္းကုန္းအုပ္စုေအာင္သုခေက်း႐ြာ တြင္ သက္ငယ္မဒိန္းတစ္ခုျဖစ္ပြား
အသက္ ၁၁ ႏွစ္ အ႐ြယ္သမီးျဖစ္သူအားပေထြးျဖစ္သူ ၃၃ ႏွစ္ (ခန့္မွန္း) မွသားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္ေသာေၾကာင့္
ဒဏ္ရာရ မိန္းကေလးအား ခုတင္ ၁၀၀၀ျ ပည္သူ႕ ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ သုခဒါနပရဟိတအသင္းမွ ပ္ို႔ေဆာင္ကူညီခဲ့ပါသည္။
သုခ ဒါန ပရဟိတ အသင္းေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္09-420 942 455၊09-773 592 699
အလှမယ် မိုးစက်ဝိုင်ကို အသရေဖျက်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုဖို့အတွက်တရားလိုတစ်ဦးကတရားရုံးမှာဦးတိုက်လျှောက်ထား
မိုးစက်ဝိုင်ကတော့ အလှမယ်တစ်ယောက်အဖြစ် နာမည်ကျော်ကြား လူသိများခဲ့ပြီး သီချင်းဗီဒီယိုများ ကြော်ငြာများနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများကိုပါ ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အလှမယ် မိုးစက်ဝိုင်ကို အသရေဖျက်မှုနဲ့ တရားလို မေဟန်နီထွန်းက တရားစွဲဆိုဖို့အတွက် တရားရုံးမှာ ဦးတိုက်လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။
အဆိုပါ အမှုဖြစ်စဉ်ကိုတော့ ဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှ သတင်းပြန်ကြားရေးအရာရှိ ဦးစောထွန်းအေး က မီဒီယာမှာ အခုလိုပဲ ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ” အခု အမှုမှာ တရားလိုကတော့ မေဟန်နီထွေး စွပ်စွဲခံရသူကတော့ ဒေါ်ဝေဝေခိုင် ( ခေါ် ) မိုးစက်ဝိုင် နဲ့ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဒေါ်မျိုးမြတ်သန္တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ဒေါ်မေဟန်နီထွန်းက သူတို့ကြောင့် ဂုဏ်သိက္ခာတွေ ကျပါတယ် နစ်နာရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ဦးတိုက်လျှောက်ထားတဲ့ အမှုဖြစ်တယ်။
ဦးတိုက်လျှောက်ထားတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ အမှုစစ်တရားသူကြီးကတော့ တွဲဖက်မြို့နယ်တရားသူကြီး ဒေါ်အေးသူဇာနွယ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူကနေပြီးတော့ ရာဇဝတ်ကြီး ပုဒ်မ ၂၀၀ အရ စစ်ဆေးတယ်။ ရဲစခန်းကို ရာဇဝတ်ကြီး ပုဒ်မ ၂၀၂ ပုဒ်မခွဲ ၁၀၀ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဆိုပြီးတော့ အစီရင်ခံစာတင်ပြခိုင်းထားတယ်။ အစီရင်ခံစာပြန်တင်ခိုင်းတဲ့ နေ့ကတော့ ၂၅ ရက် ၈ လ ၂၀၂၀ ဖြစ်ပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်က တစ်မှုပဲ သိရသေးတယ်။ အသရေဖျက်မှု မြောက်မမြောက်ကတော့ အခုက action မှ မယူရသေးတာ…ဗဟန်းမြို့မရဲစခန်းကနေ အစီရင်ခံစာ ပြန်တက်လာမယ်။အစီရင်ခံစာပြန်တက်လာတဲ့အပေါ်မှာ အမှုစစ်တရားသူကြီးက action ယူပြီးမှအသရေဖျက်မှု မြောက်မမြောက်တို့ ဘာတို့ ဆုံးဖြတ်ရမှာ။ အခုလောလောဆယ်ကတော့ မေဟန်နီထွေးက ဦးတိုက်လျှောက်ထားလို့ ရဲစခန်းကို အစီရင်ခံစာ တင်ခိုင်းထားတဲ့ အဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ရဲကနေ အစီရင်ခံစာ တင်ပြီးရင် အဆိုပါ အစီရင်ခံစာအရ action ယူလိုက်မှ သူတို့ကို ခေါ်မှာ။ action ယူစရာအကြောင်းမရှိရင် ခေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ ” ဆိုကာ အမှုဖြစ်စဉ်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အခုဖော်ပြခဲ့တာကတော့ အသရေဖျက်မှုနဲ့ တရားရုံးကို ဦးတိုက်လျှောက်ထားခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ အလှမယ် မိုးစက်ဝိုင်အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။
မိုးစက္ဝိုင္ကေတာ့ အလွမယ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားခဲ့ၿပီး သီခ်င္းဗီဒီယိုမ်ား ေၾကာ္ညာမ်ားနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးမ်ားကိုပါ ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ အလွမယ္ မိုးစက္ဝိုင္ကို အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ တရားလို ေမဟန္နီထြန္းက တရားစြဲဆိုဖို႔အတြက္ တရား႐ုံးမွာ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါတယ္။
အဆိုပါ အမႈျဖစ္စဥ္ကိုေတာ့ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ သတင္းျပန္ၾကားေရးအရာရွိ ဦးေစာထြန္းေအး က မီဒီယာမွာ အခုလိုပဲ ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ ” အခု အမႈမွာ တရားလိုကေတာ့ ေမဟန္နီေထြး စြပ္စြဲခံရသူကေတာ့ ေဒၚေဝေဝခိုင္ ( ေခၚ ) မိုးစက္ဝိုင္ နဲ႔ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ေဒၚမ်ိဳးျမတ္သႏၲာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ေဒၚေမဟန္နီထြန္းက သူတို႔ေၾကာင့္ ဂုဏ္သိကၡာေတြ က်ပါတယ္ နစ္နာရပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အမႈျဖစ္တယ္။
ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားတာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမႈစစ္တရားသူႀကီးကေတာ့ တြဲဖက္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚေအးသူဇာႏြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူကေနၿပီးေတာ့ ရာဇဝတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၂၀၀ အရ စစ္ေဆးတယ္။ ရဲစခန္းကို ရာဇဝတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၂၀၂ ပုဒ္မခြဲ ၁၀၀ စုံစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံစာတင္ျပခိုင္းထားတယ္။ အစီရင္ခံစာျပန္တင္ခိုင္းတဲ့ ေန႔ကေတာ့ ၂၅ ရက္ ၈ လ ၂၀၂၀ ျဖစ္ပါတယ္။
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က တစ္မႈပဲ သိရေသးတယ္။ အသေရဖ်က္မႈ ေျမာက္မေျမာက္ကေတာ့ အခုက action မွ မယူရေသးတာ…ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းကေန အစီရင္ခံစာ ျပန္တက္လာမယ္။ အစီရင္ခံစာ ျပန္တက္လာတဲ့အေပၚမွာ အမႈစစ္တရားသူႀကီးက action ယူၿပီးမွ အသေရဖ်က္မႈ ေျမာက္မေျမာက္တို႔ ဘာတို႔ ဆုံးျဖတ္ရမွာ။ အခုေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ေမဟန္နီေထြးက ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားလို႔ ရဲစခန္းကို အစီရင္ခံစာ တင္ခိုင္းထားတဲ့ အဆင့္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ရဲကေန အစီရင္ခံစာ တင္ၿပီးရင္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ action ယူလိုက္မွ သူတို႔ကို ေခၚမွာ။ action ယူစရာအေၾကာင္းမရွိရင္ ေခၚစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ ” ဆိုကာ အမႈျဖစ္စဥ္ကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ အခုေဖာ္ျပခဲ့တာကေတာ့ အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ တရား႐ုံးကို ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းခံလိုက္ရတဲ့ အလွမယ္ မိုးစက္ဝိုင္အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ရွင္။
Categories Crime Tags Celebrity, မိုးစက်ဝိုင်
လွန်ခဲ့သော နှစ်လခန့်ကFacebook ၌ သိကျွမ်းရင်းနှီးခဲ့သူတစ်ဦးက ဘုရားများဖူးရန်ပို့‌ပေးမည်ဟုခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးရွှေထည်ပစ္စည်းများအား လုယက်ခဲ့
ဒေါ်——–၊ ၄၉ နှစ် သည်ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန်ရှိတူမဖြစ်သူထံသို့အလည်ရောက်ရှိစဉ်လွန်ခဲ့သော နှစ်လခန့်ကFacebook ၌ သိကျွမ်းရင်းနှီးခဲ့သူရွက်သစ် အကောင့် နှင့် Thu Rain အကောင့်ပ်ုင်ရှင် သူရိန်ထွန်းဆိုသူက
ပဲခူးမြို့ပေါ်ရှိဘုရားများဖူးရန်လိုက်ပို့ပေးမည်ဟုဆိုကာယာဉ်အမှတ် အမျိုးအစား မမှတ်မိခဲရောင် Taxi ယာဉ်ဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်လိုက်ပါခဲ့ပါသည်။
ထိုနေ့နံနက် ၁၁ နာရီ အချိန်ခန့်တွင်ပဲခူး မြို့မှ ရန်ကုန်မြို့သို့အမြန်လမ်းမကြီးအတိုင်းပြန်လည်ထွက်ခွာလာစဉ်အမြန်လမ်းမကြီးမိုင်တိုင်အမှတ်(၀/၀) နှင့် (၀/၁) အကြားအရောက်သူရိန်ထွန်း မှကားအနားပေးဦးမည်ဟုဆိုကာကားရပ်နားပြီး
ကားနောက်ခန်း၌၎င်းတို့ (၂) ဦးစကားထိုင်ပြောစဉ်သူရိန်ထွန်းမှဒေါ် —-ဝတ်ဆင် ထားသည့်ရွှေထည်ပစ္စည်းများအား
ရွှေထည်ပစ္စည်းများချွတ်ပေးပြီးနောက်သူရိန်ထွန်းဆိုသူမှ ထမင်းစားသွားမည်ကားရှေ့ခန်းသို့ ပြောင်းထိုင်ရန်ခေါ်သည့်အတွက်ကားရှေ့ခန်းသို့ပြောင်းထိုင်ရန်ကားနောက်ခန်းမှ ဆင်းချိန်ကားအားမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါသည်။ချွတ်ပေးခဲ့သည့်ရွှေထည်ပစ္စည်းနှင့် ပါဆုံးပစ္စည်းစာရင်း
၁။ မီးလင်းလက်ကောက် (၂) ကွင်း၊ကာလတန်ဘိုး ၂၄၀၀၀၀ဝိ/-
၂။ လုံးချောလက်ကောက် (၅) ကွင်း၊ကာလတန်ဘိုး ၁၅၀၀၀၀ဝိ/-
၃။ စပရိန်လက်စွပ် (၂) ကွင်း၊ကာလတန်ဘိုး ၉၀၀၀၀ဝိ/-
၄။ ကျောက်နီလက်စွပ် (၁) ကွင်း၊ကာလတန်ဘိုး ၆၀၀၀၀ဝိ/-
၅။ ကျောက်ပြာလက်စွပ် (၁) ကွင်း ကာလတန်ဘိုး ၃၀၀၀၀ဝိ/-
၆။ စိန်ပွင့် (၂)ပွင့်တွဲပါ စိန်လက်စွပ် (၁) ကွင်းကာလတန်ဘိုး ၃၀၀၀၀ဝိ/-
၇။ စိန်လော့ကတ်သီးပါ ပလက်တီနမ်ဆဲကြိုး (၁) ကုံး၊ကာလတန်ဘိုး ၁၅၀၀၀၀ဝိ/-
၈။ ၀၉ ၄၄——- MPT SIM ကတ်နှင့် Telenor. နံပါတ်မမှတ်မိ Sim ကတ်ပါMI Note7အမျိုးအစား လက်ကိုင်ဖုန်း (၁)လုံးကာလတန်ဘိုး ၂၅၀၀၀ဝိ/-
၉။ တစ်ထောင်ကျပ်တန် ငွေစက္ကူ (၁) အုပ် ၁၀၀၀၀ဝိ/- စုစုပေါင်း ၇၈၅၀၀၀ဝိ/-
အထက်ပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ဒေါ်—— မှ ၃.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့ညနေ ၆ နာရီ ၁၅ အချိန်အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့၊
အမှတ်(၃)လမ်းဆုံအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း၌အမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အတွက်အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့်အမှတ်(၃) လမ်းဆုံ ရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ် သန့်ဇင်အမှတ်(၃) လမ်းဆုံ တိုးလ်ဂိတ် တာဝန်ခံရဲအုပ် မင်းမင်းစိုးနှင့် အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှရဲလုပ် ငန်းများပြီးပြည့်စုံစွာစုံစမ်းထောက်လှမ်းကာတရားခံ ဖမ်းဆီးရမိရေးပါဆုံးပစ္စည်းများ ပြန်လည်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့၏ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ရွက်သစ် fb Acc နှင့်Thu Rain fb Acc ပိုင်ရှင်
သူရိန်ထွန်းဆိုသူမှာဇော်မျိုးလွင်၊ ၂၇ နှစ်၊ (ဘ)ဦးခင်မောင်လွင်၊၁၂/အစန (နိုင်) ၂၃၂၄၅၄၊ အမှတ်(၆၅၃)၊မြို့ပတ် လမ်း၊ ရွာမအနောက်ရပ်၊ အင်းစိန်မြို့ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးနေသူဖြစ်ကြောင်းပေါ် ပေါက်ခဲ့ပြီး
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဇော်မျိုးလွင်အား ၈.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့ည ၉ နာရီအချိန် အမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးကာသက်သေခံပစ္စည်းများ သိမ်း ဆည်းခြင်း၊အမှုခိုင်မာစွာတည် ဆောက်အမြန်တရားစွဲတင်ပို့နိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဖုန်းတစ်လုံးကြောင့် အသတ်ပေးလိုက်ရတဲ့ မိသားစု ၃ ယောက်
June 25, 2020 by Shwengwe Games
တစ်နှစ်ခွဲကျော် ကလေးငယ်ပါ သေဆုံးခဲ့ရသည့် ဥဿရံရွာ သုံးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုက ကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းမိပြီ
တစ်နှစ်ခွဲကျော် အရွယ် ကလေးငယ် ၁ ဦးပါ သေဆုံးခဲ့ရသည့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်ခရိုင် ၊ ရေဖြူမြို့ ၊ ဥဿရံကျေးရွာအနီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သုံးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု တွင် ကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဇွန်လ ၂၅ ရက်တွင် သိရသည်။
အဆိုပါ လူသတ်မှုမှာ ဥဿရံကျေးရွာ၊ရေး−ထားဝယ်ကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် (၂၃/၂၄) မီးရထားသံလမ်းဂိတ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောဝန်ထမ်း(ဦးအောင်ကျော်ထွန်း) နေအိမ်တွင် ဇွန် ၁၃ ရက် က ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကိုအောင်ကျော်ထွန်း၊ဇနီး နှင့် ၎င်း၏သားငယ်တို့ အသတ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ရေဖြူမြို့နယ်ရဲစခန်းတွင် မသင်္ကာ၍ ထိန်းသိမ်းထားသူ ရေဖြူမြို့နယ်နေ သားသား(၂၅) နှစ်၏ ဖုန်းမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ခဲ့သူများဖြစ်သည့် ရေဖြူမြို့၊ ဥဿရံ ကျေးရွာနေ ဇော်လင်း(၂၂)နှစ်၊ ဝိုင်ကေ(၂၇)နှစ်နှင့် ဦးကျော်မင်းထွန်း (၂၈)နှစ်တို့အား ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ စစ်ဆေးရာ ၎င်းတို့သည် အသတ်ခံရသူ ဦးအောင်ကျော်ထွန်း(ခ) ဖိုးလပြည့်နှင့် ဆက်သွယ်၍ မူးယစ်ဆေးဝါးဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း၊မူးယစ်ဆေးဝါးဝယ်ယူရာတွင် ငွေမရှိ၍ ဇော်လင်း၏ဖုန်းအား အပေါင်ထားခဲ့ကြောင်း၊ ဖုန်းပြန်လည်ရွေးယူရန် ငွေမရှိသဖြင့် ကျော်မင်းထွန်းနှင့် ဝိုင်ကေတို့က ဦးအောင်ကျော်ထွန်း၏အိမ်သို့ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့က သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဇော်လင်း၏ဖုန်းအားတောင်းရာတွင် အဆင်မပြေသဖြင့် ကျော်မင်းထွန်းက
ဦးအောင်ကျော်ထွန်းတို့ မိသားစု(၃)ဦးအား အသင့်ယူဆောင်လာသော ဓားဖြင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ကို စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း၊ကျော်မင်းထွန်းနှင့် ဝိုင်ကေတို့အားဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရသည်။ ဖုန်းတစ်လုံးကြောင့်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ ထား ဝယ် ခရိုင်ရေဖြူမြို့နယ်မှ သုံးလောင်းပြိုင်လူသတ်မူ့
ရေးမြို့နယ် ချောင်းတောင်ရွာနေ ကျော်မင်းထွန်းနှင့်ရေဖြူမြို့နယ် ဥသာရံကျေးရွာနေ ဝိုင်ကေတို့မှ အသတ်ခံရသူ အောင်ကျော်ထွန်းထံ ၁၃.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီ ခန့်တွင် မူးယစ်ဆေးဝယ်ရန်ငွေမရှိသဖြင့် ကိုင်ဆောင်သောဖုန်းအားသွားပေါင်ခဲ့ပါသည်
အဆိုပါ ည ၁ နာရီခန့်တွင်အပေါင်ထားသောဖုန်းအားပြန်တောင်းရာမရသဖြင့် အောင်ကျော်ထွန်းအားလည်ပင်းဓားနဲ့ခုတ်ပြီးပြန်ထွက်လာစဉ်မိန်းမဖြစ်သူမှ အော်ဟစ်ငိုယိုနေသောကြောင့်တစ်ယောက်ကမိန်းမအားနောက်မှ ကျောသိုင်းချုပ်နှောင်ပြီးတစ်ယောက်က ရှေ့မှပါလာသောဓားဖြင့်အချက်များစွာထိုးသတ်ကာလည်လှီးခဲ့ပြီး ၁ နှစ်ခွဲအရွယ်ကလေးအား ဓားဖြင့်လည်လှီးသတ်ခဲ့ပါသည် တရားခံများအားလုံးမိပြီးဖြစ်ပါသည်။
Aung Tin Ko Ko
ဖုန္းတစ္လုံးေၾကာင့္ အသတ္ေပးလိုက္ရတဲ့ မိသားစု ၃ ေယာက္
တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ကေလးငယ္ပါ ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ ဥႆရံ႐ြာ သုံးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈက က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဖမ္းမိၿပီ
တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ အ႐ြယ္ ကေလးငယ္ ၁ ဦးပါ ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ခရိုင္ ၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕ ၊ ဥႆရံေက်း႐ြာ အနီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သုံးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈ တြင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ သိရသည္။
အဆိုပါ လူသတ္မႈမွာ ဥႆရံေက်း႐ြာ၊ေရး−ထားဝယ္ကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၂၃/၂၄) မီးရထားသံလမ္းဂိတ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္း (ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း) ေနအိမ္တြင္ ဇြန္ ၁၃ ရက္ က ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကိုေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၊ဇနီး ႏွင့္ ၎၏ သားငယ္တို႔ အသတ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ မသကၤာ၍ ထိန္းသိမ္းထားသူ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ေန သားသား(၂၅) ႏွစ္၏ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕၊ ဥႆရံ ေက်း႐ြာေန ေဇာ္လင္း(၂၂)ႏွစ္၊ ဝိုင္ေက(၂၇)ႏွစ္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္း (၂၈)ႏွစ္တို႔အား ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုသို႔ စစ္ေဆးရာ ၎တို႔သည္ အသတ္ခံရသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း(ခ) ဖိုးလျပည့္ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ မူးယစ္ေဆးဝါးဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊မူးယစ္ေဆးဝါးဝယ္ယူရာတြင္ ေငြမရွိ၍ ေဇာ္လင္း၏ဖုန္းအား အေပါင္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖုန္းျပန္လည္ေ႐ြးယူရန္ ေငြမရွိသျဖင့္ ေက်ာ္မင္းထြန္းႏွင့္ ဝိုင္ေကတို႔က ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၏အိမ္သို႔ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႕က သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဇာ္လင္း၏ဖုန္းအားေတာင္းရာတြင္ အဆင္မေျပသျဖင့္ ေက်ာ္မင္းထြန္းက
ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းတို႔ မိသားစု(၃)ဦးအား အသင့္ယူေဆာင္လာေသာ ဓားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ကို စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ေက်ာ္မင္းထြန္းႏွင့္ ဝိုင္ေကတို႔အားဥပေဒအရအေရးယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ဖုန္းတစ္လုံးေၾကာင့္အသက္ခံခဲ့ရတဲ့ ထား ဝယ္ ခရိုင္ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ သုံးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မူ႕
ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းေတာင္႐ြာေန ေက်ာ္မင္းထြန္းႏွင့္ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ဥသာရံေက်း႐ြာေန ဝိုင္ေကတို႔မွ အသတ္ခံရသူ ေအာင္ေက်ာ္ထြန္းထံ ၁၃.၆.၂၀၂၀ ရက္ေန႕ ည ၁၁ နာရီ ခန႔္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝယ္ရန္ေငြမရွိသျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္ေသာဖုန္းအားသြားေပါင္ခဲ့ပါသည္
အဆိုပါ ည ၁ နာရီခန႔္တြင္အေပါင္ထားေသာဖုန္းအားျပန္ေတာင္းရာမရသျဖင့္ ေအာင္ေက်ာ္ထြန္းအားလည္ပင္းဓားနဲ႕ခုတ္ၿပီးျပန္ထြက္လာစဥ္မိန္းမျဖစ္သူမွ ေအာ္ဟစ္ငိုယိုေနေသာေၾကာင့္တစ္ေယာက္ကမိန္းမအားေနာက္မွ ေက်ာသိုင္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီးတစ္ေယာက္က ေရွ႕မွပါလာေသာဓားျဖင့္အခ်က္မ်ားစြာထိုးသတ္ကာလည္လွီးခဲ့ၿပီး ၁ ႏွစ္ခြဲအ႐ြယ္ကေလးအား ဓားျဖင့္လည္လွီးသတ္ခဲ့ပါသည္ တရားခံမ်ားအားလုံးမိၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အမည်ခံ၍ လိမ်လည်အလှူခံသူ လေးဦးအား ယမန်နေ့က ဖမ်းဆီးအရေးယူထား ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအမည်ခံ၍ လိမ်လည်အလှူခံမှုရှိနေကြောင်း သတင်းအရ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကစုံစမ်း မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရန်ကင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ Perfect KTV တွင် အမျိုး သား လေးဦး က “ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဌာနပရဟိတအဖွဲ့မှဖြစ်ကြောင်း၊ကလေးသူငယ်များအားစာရေးကိရိ ယာ၊အာဟာရဒါနနှင့် သံဃာတော် များအတွက် အလှူခံသည်”ဟု ပြောဆို ၍
ငွေကျပ် ၅၀၀၀၀ အားလိမ်လည် အလှူခံသွားကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့ပြီးလိမ်လည်အလှူခံသွားသူ လေးဦးအား ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူနိုင်ရေးဆက်လက် စုံစမ်းရှာဖွေမှုများပြုလုပ်ခဲ့ သည်။ဇွန် ၂၃ ရက် ည ၈ နာရီခန့်တွင်မရမ်းကုန်းမြို့နယ် သမိုင်းဘူတာ ရုံလမ်းမပေါ်၌လိမ်လည်အလှူခံသူများဖြစ်သည့် မြို့ဟောင်းအရှေ့ ရပ်ကွက်သန်လျင်မြို့နယ်နေ ဝေဖြိုးအောင် (၂၅နှစ်)၊(၁၆၈)ရပ်ကွက် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်နေ အောင်မျိုး ဦး(၂၃နှစ်)၊ဘုရားကုန်းကျေးရွာ သန်လျင်မြို့နယ်နေ မျိုးကိုကို (၂၈နှစ်) နှင့် (၁၂)ရပ်ကွက် သာကေတမြို့နယ် နေထွန်းဝင်းဇော်(ခ)ကိုထွန်း(၂၅နှစ်)တို့ကို
ပရိုဘောက်ယာဉ်တစ်စီးနှင့် အတူ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင် စိစစ်ရေးကတ် တစ်ခု၊ အလှူခံစာရွက် စာတမ်းအတုများနှင့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ သဖြင့် ရန်ကင်းမြို့မရဲစခန်းက အမှုဖွင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကွင်းဆက် ဆက်လက်ဖော်ထုတ် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အမည္ခံ၍ လိမ္လည္အလႉခံသူ ေလးဦးအား ယမန္ေန႔က ဖမ္းဆီးအေရးယူထား ေၾကာင္း သိရသည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအမည္ခံ၍ လိမ္လည္အလႉခံမႈ႐ွိေနေၾကာင္း သတင္းအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကစုံစမ္း မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ Perfect KTV တြင္ အမ်ိဳး သား ေလးဦး က “ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနပရဟိတအဖြဲ႕မွျဖစ္ေၾကာင္း၊ကေလးသူငယ္မ်ားအားစာေရးကိရိ ယာ၊အာဟာရဒါနႏွင့္ သံဃာေတာ္ မ်ားအတြက္ အလႉခံသည္”ဟု ေျပာဆို ၍
ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀၀ အားလိမ္လည္ အလႉခံသြားေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိခဲ့ၿပီးလိမ္လည္အလႉခံသြားသူ ေလးဦးအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူႏိုင္ေရးဆက္လက္ စုံစမ္း႐ွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ဇြန္ ၂၃ ရက္ ည ၈ နာရီခန္႔တြင္မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ သမိုင္းဘူတာ ႐ုံလမ္းမေပၚ၌လိမ္လည္အလႉခံသူမ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းအေ႐ွ႕ ရပ္ကြက္သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ေန ေဝၿဖိဳးေအာင္ (၂၅ႏွစ္)၊(၁၆၈)ရပ္ကြက္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ေန ေအာင္မ်ိဳး ဦး(၂၃ႏွစ္)၊ဘုရားကုန္းေက်း႐ြာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ေန မ်ိဳးကိုကို (၂၈ႏွစ္) ႏွင့္ (၁၂)ရပ္ကြက္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ေနထြန္းဝင္းေဇာ္(ခ)ကိုထြန္း(၂၅ႏွစ္)တို႔ကို
ပ႐ိုေဘာက္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ အတူ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕ မွတ္ပုံတင္ စိစစ္ေရးကတ္ တစ္ခု၊ အလႉခံစာ႐ြက္ စာတမ္းအတုမ်ားႏွင့္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ သျဖင့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းက အမႈဖြင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ကြင္းဆက္ ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ လ်က္႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။
ရပ်ထားသော ကားနှစ်စီးပေါ်မှ တရားမဝင်သစ် (၉) တန်ကို ပိုင်ရှင်မဲ့ ဖမ်းဆီးရမိ
June 22, 2020 by Shwengwe Games
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဇွန်လ (၂၁)
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မူဆယ်မြို့နဲ့ လားရှိုးမြို့တို့မှာ ရပ်ထားတဲ့ကားနှစ်စီးပေါ်မှ တရားမဝင်သစ်(၉)တန်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ (၁၇)ရက်က ပိုင်ရှင်မဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သစ်တောဦးစီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။
မူဆယ်မြို့နယ်၊စိုးသစ္စာဆီဆိုင် အနောက်ဘက်မှာဇွန်လ (၁၇) ရက်ကလူမရှိဘဲ ရပ်တန့်ထားတဲ့ မော်တော်ယာဉ် အမှတ် (SHN 2B/3096) HOWO (အနီရောင်) (၁၂)ဘီးယာဉ်ပေါ်မှ တရားမဝင် သစ်မကျီးဓါးရွေး (၈၂)လုံး၊(၈)တန်ကို ပိုင်ရှင်မဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဲဒီလိုပဲ လားရှိုးမြို့ လားရှိုးမြို့နယ်၊ လားရှိုး-မူဆယ်ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၆၅/၅)အနီးနေရာမှာ ဇွန်လ(၁၇)ရက်ကမသင်္ကာဖွယ် လူမရှိဘဲရပ်တန့်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်အမှတ်(MDY 9H/6574)(TOYOTA Alphard) (အဖြူရောင်) ယာဉ်ကို စစ်ဆေးရာ တရားမဝင်ပိတောက်ဓါးရွေ (၂၉)ချောင်း (၁)တန်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဆက် စပ်ပတ်သက်တဲ့တရားခံတွေကို စုံစမ်းရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးဥပဒေနဲ့အညီ ထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်း သစ် တောဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရပ္ထားေသာ ကားႏွစ္စီးေပၚမွ တရားမဝင္သစ္ (၉) တန္ကို ပိုင္ရွင္မဲ့ ဖမ္းဆီးရမိ
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဇြန္လ (၂၁)
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နဲ႕ လားရွိုးၿမိဳ႕တို႔မွာ ရပ္ထားတဲ့ကားႏွစ္စီးေပၚမွ တရားမဝင္သစ္(၉)တန္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ဇြန္လ (၁၇)ရက္က ပိုင္ရွင္မဲ့ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။
မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္၊စိုးသစၥာဆီဆိုင္ အေနာက္ဘက္မွာဇြန္လ (၁၇)ရက္ကလူမရွိဘဲ ရပ္တန႔္ထားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမွတ္ (SHN 2B/3096) HOWO (အနီေရာင္) (၁၂)ဘီးယာဥ္ေပၚမွ တရားမဝင္ သစ္မက်ီးဓါးေ႐ြး (၈၂)လုံး၊(၈)တန္ကို ပိုင္ရွင္မဲ့ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
အဲဒီလိုပဲ လားရွိုးၿမိဳ႕ လားရွိုးၿမိဳ႕နယ္၊ လားရွိုး-မူဆယ္ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၆၅/၅)အနီးေနရာမွာ ဇြန္လ(၁၇)ရက္က မသကၤာဖြယ္ လူမရွိဘဲရပ္တန႔္ထားတဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမွတ္ (MDY 9H/6574) (TOYOTA Alphard) (အျဖဴေရာင္) ယာဥ္ကို စစ္ေဆးရာ တရားမဝင္ပိေတာက္ဓါးေ႐ြ (၂၉)ေခ်ာင္း (၁)တန္ကိုဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။
အဆိုပါျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႕ပါတ္သက္ၿပီး ဆက္ စပ္ပတ္သက္တဲ့တရားခံေတြကို စုံစမ္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီးဥပေဒနဲ႕အညီ ထိေရာက္စြာအေရးယူနိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔လည္း သစ္ ေတာဦးစီးဌာနကထုတ္ျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
3M Maskအတုရောင်းမှုနဲ့ ဆေးဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်သူဌေးအားထောင်ဒဏ် (15 )နှစ်ချမှတ်
Kangbaixin ဆေးဆိုင်လုပ်ငန်းဟာ ပီကင်းမြို့တော်မှာတင် ဆေးဆိုင်ပေါင်း 60 ရှိပါတယ်။Kangbaixin ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ Li Dong နဲ့ အပေါင်းအပါ2ယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Li Dong က ထောင်ဒဏ် 15 နှစ်ကျပြီးကျန်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Li Yuzhang နဲ့ Luo Hanyi တို့က ဘယ်လောက်ကျမလဲမသိရသေးပါ။
တရုတ်ပြည်မှာ COVID အကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတဲ့ January လထဲမှာ Li Dong ရဲ့ Kangbaixin ဆေးဆိုင်တွေဟာ 3M mask တွေလို့ ကြေညာပြီး အတုပေါင်း5သိန်း 8 သောင်းကို ရောင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်က Mask စျေးတွေကအရမ်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးလူတွေကရသလောက်လုဝယ်ခဲ့ကြတာပါ။
ဒါပေမယ့် လူတွေက3M mask တွေရဲ့အရည်အသွေးကို ကွန်ပလိန်းတက်လာကြတဲ့အခါမှာဒေသအာဏာပိုင်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ 3M mask အစစ်တွေမဟုတ်ပဲအတုတွေကို Kangbaixin ဆေးဆိုင်တွေကဝယ်ရောင်းလုပ်ခဲ့တာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး Li Dong ကို February 1 ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
February 25 ရက်နေ့မှာ mask အတုလုပ်မှု၊ အရည်အသွေးမမီတာတွေရောင်းချမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုတရားစွဲဆိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာ Kangbaixin ဆေးဆိုင်တွေကဝယ်ယူခဲ့သူတွေကို တောင်းပန်ပြီးစျေးသုံးဆပေးကာလျှော်ကြေးပေးမယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ January 23 ကနေ 26 ရက်နေ့အထိ သုံးရက်အတွင်းအတုရောင်းမှု နဲ့ ထောင်ဒဏ် 15 နှစ်ချတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ပြည်သူအမြောက်အမြားကိုရောဂါဖြစ်ပြီးသေစေနိုင်မှုနဲ့ တရုတ်ရဲ့ အရေးယူမှုဟာ အတုယူစရာဖြစ်ပါတယ်။
Li Dong ရဲ့ ကုမ္ပဏီဟာ အဲ့ဒီ Mask အတုရောင်းမှုကနေ မြန်မာငွေ သိန်း 8000 ကျော်မြတ်စွန်းခဲ့ပါတယ်။သူ့ရှေ့နေကတော့ အတုမှန်းမသိလို့ ရောင်းမိပါတယ်လို့ ခုခံချေပပေမယ့် မရပါ။
Kangbaixin ဆေးဆိုင်လုပ်ငန်းဟာ Covid-19 မှာ အရေးယူခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ။January လ ထဲမှာပဲ PM 2.5 Mask တွေကို စျေးအဆ 260 တင်ရောင်းမှုနဲ့ မြန်မာငွေ သိန်း 200 လောက်ဒဏ်ချခံရကြောင်းကျနော်နေ့စဉ်သတင်းထဲမှာထည့်ရေးဖူးပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရရဲ့အရေးယူမှုက မြန်ပါတယ်။Mask အတုတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာ Supreme People’s Court က ဥပဒေအသစ်ကို February 10 ရက်နေ့မှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထုတ်ပြီး စအရေးယူတာဖြစ်ပါကြောင်း။
Richard Myo Thant(21-June-2020)
3M Maskအတုေရာင္းမႈနဲ႔ ေဆးဆိုင္လုပ္ငန္း႐ွင္သူေဌးအားေထာင္ဒဏ္ (15 )ႏွစ္ခ်မွတ္
Kangbaixin ေဆးဆိုင္လုပ္ငန္းဟာ ပီကင္းၿမိဳ႕ေတာ္မွာတင္ ေဆးဆိုင္ေပါင္း 60 ႐ွိပါတယ္။Kangbaixin ရဲ႕ ဥကၠ႒ Li Dong နဲ႔ အေပါင္းအပါ2ေယာက္ကို အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Li Dong က ေထာင္ဒဏ္ 15 ႏွစ္က်ၿပီး က်န္ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Li Yuzhang နဲ႔ Luo Hanyi တို႔က ဘယ္ေလာက္က်မလဲမသိရေသးပါ။
တ႐ုတ္ျပည္မွာ COVID အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေနတဲ့January လထဲမွာ Li Dong ရဲ႕ Kangbaixin ေဆးဆိုင္ေတြဟာ 3M mask ေတြလို႔ ေၾကညာၿပီးအတုေပါင္း5သိန္း 8 ေသာင္းကို ေရာင္းခဲ့ပါတယ္။အဲ့ဒီအခ်ိန္က Mask ေစ်းေတြကအရမ္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး လူေတြက ရသေလာက္လုဝယ္ခဲ့ၾကတာပါ။
ဒါေပမယ့္ လူေတြက3M mask ေတြရဲ႕အရည္အေသြးကို ကြန္ပလိန္းတက္လာၾကတဲ့အခါမွာ‌ေဒသအာဏာပိုင္ေတြကစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အဲ့ဒီမွာ 3M maskအစစ္ေတြမဟုတ္ပဲ အတုေတြကို Kangbaixin ေဆးဆိုင္ေတြက ဝယ္ေရာင္းလုပ္ခဲ့တာေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး Li Dong ကို February 1 ရက္ေန႔မွာဖမ္းဆီးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
February 25 ရက္ေန႔မွာ mask အတုလုပ္မႈ၊ အရည္အေသြးမမီတာေတြ ေရာင္းခ်မႈနဲ႔ တရားစြဲဆိုခဲ့ပါတယ္။အဲ့လို တရားစြဲဆိုၿပီးသုံးရက္အၾကာမွာ Kangbaixin ေဆးဆိုင္ေတြကဝယ္ယူခဲ့သူေတြကို ေတာင္းပန္ၿပီး ေစ်းသုံးဆေပးကာ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးမယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။
ဒါဟာ January 23 ကေန 26 ရက္ေန႔အထိ သုံးရက္အတြင္းအတုေရာင္းမႈ နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ 15 ႏွစ္ခ်တာျဖစ္ပါတယ္။သူ႕ျပည္သူအေျမာက္အျမားကို ‌ေရာဂါျဖစ္ၿပီးေသေစႏိုင္မႈနဲ႔တ႐ုတ္ရဲ႕အေရးယူမႈဟာ အတုယူစရာျဖစ္ပါတယ္။
Li Dong ရဲ႕ ကုမၸဏီဟာ အဲ့ဒီ Mask အတုေရာင္းမႈကေန ျမန္မာေငြ သိန္း 8000 ေက်ာ္ျမတ္စြန္းခဲ့ပါတယ္။သူ႕ေ႐ွ႕ေနကေတာ့အတုမွန္းမသိလို႔ ေရာင္းမိပါတယ္လို႔ ခုခံေခ်ပေပမယ့္ မရပါ။
Kangbaixin ေဆးဆိုင္လုပ္ငန္းဟာ Covid-19 မွာ အေရးယူခံရတာဒါပထမဆုံးအႀကိမ္မဟုတ္ပါ။January လ ထဲမွာပဲ PM 2.5 Mask ေတြကို ေစ်းအဆ 260 တင္ေရာင္းမႈနဲ႔ ျမန္မာေငြ သိန္း 200 ေလာက္ဒဏ္ခ်ခံရေၾကာင္း က်ေနာ္ေန႔စဥ္သတင္းထဲမွာ ထည့္ေရးဖူးပါတယ္။
တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕အေရးယူမႈက ျမန္ပါတယ္။Mask အတုေတြေပၚလာတဲ့အခါမွာ Supreme People’s Court က ဥပေဒအသစ္ကို February 10 ရက္ေန႔မွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ထုတ္ၿပီး စအေရးယူတာျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ကားလမ်းဘေးချုံပုတ်အတွင်းပုတ်ပွသေဆုံးနေသော အမျိုး သမီး(၂)ဦးအားသတ်ခဲ့ပြီးအလောင်းဖျောက်ဖျက်ခဲ့သူအားဖမ်းမိ
June 20, 2020 by Shwengwe Games
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)လားရှိုးမြို့နယ် တာပုံကျေးရွာအုပ်စုရှိ မတ်ချီးနုကျေးရွာအနီးကားလမ်းဘေးချုံပုတ်အတွင်းပုတ်ပွသေဆုံးနေသော အမျိုးသမီး(၂)ဦးအား သတ်ခဲ့ပြီးအလောင်းဖျောက်ဖျက်ခဲ့သူအား လားရှိုးမြို့မှ ရဲတပ်ဖွဲ့၀င်များ၏ကြိုးစားဖော်ထုတ်မှုအရ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး တရားခံမှာလည်း၄င်းကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာလားရှိုးမြို့နယ် မတ်ချီးနုကျေးရွာအုပ်စုမတ်ချီးနုကျေးရွာနှင့် (၅)မိုင်ခန့်အကွာအရှေ့မြောက်ဘက်သင်္ချ ိုင်းကုန်းသွားလမ်းဝဲဘက်ချုံတောထဲတွင်အမည်မသိအမျိုးသမီး(၂)ဦးအား ခြေလက်များကို နိုင်လွန်ကြိုးအဖြူဖြင့်တုတ်လျက် သေဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှီရပြီး ၄င်းတို့အနီးတွင်လည်း အနီရောင်ခေါင်းအုံး(၁)လုံး၊အညိုရောင်စောင် (၁)ထည်၊အနီရောင်မွေ့ယာ(၁)ခုကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်ဟု ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၆)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ကျေးရွာတာ၀န်ရှိသူကလားရှိုးနယ်မြေရဲစခန်းသို့လာရောက်သတင်းပို့ရာမှ စတင်ခဲ့သည်။
သေဆုံးနေသည့် အလောင်းများအား လားရှိုးမြို့မှလူမှုကူညီရေးကားများဖြင့်လားရှိုးမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့အပ်နှံခဲ့ပြီးဒုရဲအုပ်သိန်း၀င်းထွန်းမှတရားလိုပြုလုပ်ကာတိုင်တန်း၍အမှု့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ထို့နောက်လားရှိုးမြို့မှ ပြည်နယ်ဒုတိယရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊လားရှိုးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ၊ လားရှိုးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့၏ အနီးကပ်လမ်းညွှန်မှုဖြင့် လားရှိုးနယ်မြေရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ်ဇော်လှိုင်ထွန်း ဦးစီးပြီး နယ်မြေရဲစခန်းမှ ခေတ္တနယ်ထိန်းခေါင်းဆောင်ဒုရဲအုပ်ဟိန်းဇာနည်ထွန်းအပါအ၀င်ရဲတပ်ဖွဲ့၀င်များက မသင်္ကာသူများအားစုံစမ်းထောက်လှမ်းခဲ့ပြီးမသင်္ကာသူ(၄)ဦးအား ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာ၀န်ရှိသူတစ်ဦးက Lashio News Agecny သို့ပြောပြသည်။
ထို့သို့စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ မသင်္ကာတရားခံတစ်ဦးဖြစ်သူ ချစ်ကို(ခ)ပိုင်စိုးအောင်၊အသက်(၃၂)နှစ် ယာဉ်မောင်း ရပ်ကွက်(၉)၊နယ်မြေ(၉)နေသူအား စစ်ဆေးခဲ့ရာ၄င်းသည်လွန်ခဲ့သော(၃)နှစ်ခန့်ကစ၍မန်ဆူကားဂိတ်တွင်အဌားယာဉ် မောင်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေစဉ် သေဆုံးသူ ဒေါ်…….မှပဲခူးမြို့သို့ သွား ရောက်ရန်ကားဌားခဲ့ကြောင်း၊ထို့နောက် ၄င်းတို့(၂)ဦးအလွန်အမင်းရင်းနှီးခဲ့ပြီး ချစ်ကိုမှာအဌားယာဉ်မောင်းအဖြစ်မှ ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ဖြင့်သာခရီးစဉ်များပြေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ထို့သို့ရင်းနှီးဆက်ဆံမှုများလာချိန်တွင် ဒေါ်……. မှ၄င်းကိုတရား၀င်လက်ထပ်ပေါင်းသင်းရန်ချစ်ကိုအားမကြာခဏပြောဆိုခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ထို့အပြင်ဒေါ်……မှာချစ်ကို၏ နေအိမ်အရှေ့သို့မကြာခဏ ရောက်လာပြီး ဆူပူအော်ဟစ်ပြောဆိုခြင်းများလည်းရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
အမှုဖြစ်ပွားမည့် ရက်မရောက်မီ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၀)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ချစ်ကိုသည် ရပ်ကွက်(၉)နေအိမ်မှတစ်ဆင့် MDY-6E/4964 Wish အမျိုးအစားအဖြူရောင်ယာဉ်ဖြင့် ဒေါ်…… နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်(၁၂)၊နယ်မြေ(၇)ဟက်ကာလမ်းရှိနေအိမ်သို့ သွားရောက်ကာ လက်ဘက်ရည်သောက်မည်ဟုခေါ်ဆောင်ကာ ကုန် စုံဆိုင်တစ်ခုမှ Blue Mountain တံဆိပ်လိမ္မော်ရည်(၄)ဗူးနှင့် ရေသန့်(၁)ဗူးအား ၀ယ်ပြီးပြီး ဒေါ်……၏ ညီမ၀မ်းကွဲဖြစ်သူ သေဆုံးသူနောက်တစ်ဦးဖြစ်သည့် နန်းလောင်ခမ်းအားဖုန်းဆက်ကာ သွား ရောက်ခေါ်ဆောင်၍ ရေကန်တောင် ကန်အမှတ်(၁၄)သို့သွားရောက်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ထို့နောက် ချစ်ကိုမှ သေဆုံးသူ(၂)ဦးမရှိချိန်တွင် အချိုရည်(၂)ဗူးအတွင်းသို့ အသင့်ယူဆောင်လာသည့်အိပ်ဆေး (၁၀) လုံးစီအားကြိတ်ထည့်ကာသေဆုံးသူ(၂) ဦးအား တိုက်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ကားလေအေးပေးစက်နှင့် သီးချင်းဖွင့်ထားစဉ် သေဆုံးသူ(၂)ဦးအိပ် ပျော်သွားခဲ့ရာမှကားထဲတွင်အသင့်ယူ ဆောင်လာသည့်နိုင်လွန်ကျစ်ကြိုးဖြင့် သေဆုံးသူ(၂)ဦးအားတုတ်နှောင်ကာ ပါးစပ်များကိုလည်းတိတ်အကြည်ဖြင့် ပိတ်ထားခဲ့ပြီးကားမှန်များအလုံပိတ်၍ ကားစက်ရပ်ကာချစ်ကိုကအနီးနားတွင်လမ်းလျှောက်နေခဲ့သည်ဟုထွက်ဆို သည်။
ထို့ကဲ့သို့ပြုလုပ်ပြီး (၃)နာရီခန့်ကြာသောအချိန်တွင်ကားတံခါးအားပြန်လည်ဖွင့်ကြည့်စဉ် ဒေါ်……. နှင့် နန်းလောင်ခမ်းတို့မှာအသက်မရှုတော့ပဲငြိမ်သက်နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်အမှန်တစ်ကယ်သေဆုံးနေခြင်းရှိမရှိကိုပိတ်ထားသည့်တိတ်အားဖွင့်လှစ်ကာကြည့်ရှု့စဉ်အမှန်တစ်ကယ်သေဆုံးနေကြောင်းတွေ့ရသည်ဟု တရား ခံချစ်ကိုမှ ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ထွက်ဆိုသည်။
ထို့နောက်သေဆုံးနေသူ(၂)ဦးအား စွန့်ပစ်ရန်လူသူအရောက်အပေါက်နည်းသည့် မတ်ချီးနုကျေးရွာကားလမ်းဘေးရှိ ခြုံပုတ်အတွင်းသို့ပစ်ထားခဲ့က အလောင်းဖျောက်ဖျက်ခဲ့ကြောင်းနှင့်သေဆုံးသူအလောင်းများတွေ့ရှိကြောင်းလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင်တွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း ဟန်မပျက်နေထိုင်ခဲ့ပြီးဇွန်လ(၁၆)ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း၀န်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလားရှိုးနယ်မြေရဲစခန်းတွင် တရားခံ၏ထွက်ဆိုချက်အရသိရသည်။
အမှုမှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတရားခံ ချစ်ကို(ခ)ပိုင်စိုးအောင်အား တရားစွဲတင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် လားရှိုးနယ်မြေရဲစခန်းမှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သတင်း သိန်းမင်းထွန်း(လားရှိုး)/Lashio News Agency/လားရှိုးနယ်မြေရဲစခန်